BUDDHIST TERMS' Dictionary: BEAUTIFYING BY APPLYING UNGUENTS - ဂန္ဓမဏ္ဍန၊ အမွှေးနံ့သာ
BEAUTIFYING BY APPLYING UNGUENTS - ဂန္ဓမဏ္ဍန၊ အမွှေးနံ့သာ
ဂန္ဓမဏ္ဍန (Gandha maṇḍana) - အမွှေး, နံ့သာ ခြယ်လှယ်ခြင်း။
ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည် ကာမဂုဏ်တွယ်တာမှု လောဘကို ပယ်သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမွှေးနံ့သာခြယ်ခြင်း စသည်တို့သည် ကာမဂုဏ် အကြောင်းခံသည်။ ထိုအကြောင်းခံ အားလုံးကို ဥပုသ်သီလမယူမီ ကြိုတင်၍လည်း မပြုလုပ်ရပါ။
BEAUTIFYING BY APPLYING UNGUENTS
Making oneself beautiful by applying unguents
Observing the precepts is abandoning sensual desire. Application of unguents, etc, stems from sensual desire. One should avoid beautifying oneself even before taking the precepts.